Garoonka Basel Airport & Taxi Basel Airport
Adeegga wadidda ee fasalka dheeraadka ah, oo raqiis ah oo raaxo leh laga bilaabo A ilaa B yimaado. Haddii ay ku sii socoto garoonka diyaaradaha ee Basel Airport ama adeegga limousine ee basel, waxaan shaqooyinkeenna ku shaqeynaa si qumman oo aan qiimo lahayn.
Nagala soo xiriir adoo adeegsanaya foomkayaga codsiga ama na soo wac + 41 78 861 35 50.
Der Fahrdienst Basel Basel iyo Zurich, oo u wareejisay garoonka diyaaradaha basel ee Basel Airport. Dhacdooyinka, fanka (Art Basel, Baselworld), Kulamo (WEF Davos,), marxalado gaar ah, safarro gaar ah ama ganacsi. Horay ayaad uga baxaysaa? Miyaad soo daahdaa habeenkii ama aad haysataa boorsooyin badan? Markaas ayaad nala joogtaa, Wareejinta garoonka diyaaradaha Zurich iyo Basel kaliya sax ah, ours Garoonka diyaaradaha ee Basel had iyo jeer waa socotaa. our Basel Airport Gawaaridu waxay la socon karaan dadka 7 iyo boorsooyinkaaga oo dhan. Ka faa'iideysi adeegeena qaali ah oo raaxo leh.
Si fudud u xisaabi kharashkaaga gaarka ah
QIIMEYNTA QIIMEYNTA BIXINTA
Adeegyadayada: Bedelka Gaadiidka ee Garoonka Basel Airport,adeegga limousine
Adeegga Limousine & Taxi Basel Airport - adiga oo nala wadaagaya!
Ku soo dhowoow adeegeena bedelka Basel! Miyaad booqaneysaa magaalada, adoo maraya ama raadinaya wareejin ah adeegga Limousine Service Basel ama garoonka duulimaadka basel ee Basel? Wixii intaas ka badan iyo tan kale oo badan, darawalnimadeena saaxiibtinimo, tababarayaal, iyo sidoo kale a gaari gaar ah la heli karo. Waxaan kugula talineynaa magaalada gudaheeda, tusaale ahaan garoonka diyaaradaha ee Basel Baselworld Art Basel. Waxaanu diyaar u nahay macaamiisha ganacsiga iyo shaqsiyaadka gaarka ah. Intaa waxaa dheer, waxaad buug-yare ka dhigan kartaa adeegga limousine ee Basel iyo agagaarka ku hareereysan, laakiin sidoo kale safarrada magaalooyinka kale, tusaale ahaan Davos Forum Dhaqaalaha Adduunka anaga Adeegga baabuurta WEF Davos, Hadda nala soo xiriir annaga oo naftaada naftaada ka ilaali mid ka mid ah Basel iyo Zurich!
Basel Basel - Laga soo bilaabo Basel ilaa Madaarka Zurich
Basel Sannad kasta malaayiin qof oo martida ah waxay ka yimaadaan Swiserland, Jarmalka ama Dawladaha Gacanka. Ma aha oo keliya inay soo qaataan hal malyan oo milion ah oo ku yaal magaalada, waxay sidoo kale doonayaan inay noqdaan mobile. Marka laga soo bilaabo A ilaa B ee magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka swiserland, tusaale ahaan, Basel ilaa garoonka diyaaradaha Zurich, taasina waxay ka dhici kartaa Madaarka Taxi Basel. Baabuur ka socda hudheelka meel kasta oo magaalada ka mid ah ama u wareejinaya magaalo kale. Ama xitaa wadan kale! Dhamaan kuwan waa dhacdooyinka, kuwaas oo dad badan oo soo booqday magaalada ay buugga adeega limousine ee Basel. Gaar ahaan dalxiisayaasha iyo safarrada ganacsatadu waxay isticmaalaan adeegga khaaska ah ee garoonka diyaaradaha ee Basel ama buugaggeena adeega limousine inta ay joogayaan Basel. Laakiin sidoo kale, haddii aad rabto safar aan la ilaawi karin, tusaale ahaan qayb ka mid ah dhalashada ama arooska, si fiican ula soco adeegga limousine ee Basel! Anagu waxaan ku wareejineynaa transfers-basel.ch waa dabacsanaan waxayna bixiyaan adeegga safarka aan xuduud lahayn. Haddii aad rabto inaad noo ogolaato inaan ku kaxeyn karno dalalka kale ee gobollada ama waddamada kale, taasi maahan dhibaato!
Munaasabadaha ugu fiican ee adeega limousine / dayactir taxadarsan Basel Airport
Si kastaba ha ahaatee, waxaan sii hore ee magaalada Basel ee, ka dib oo dhan, runtii meel ka mid ah 23 kiiloomitir laba jibaaran: Haddii loo maleeyo in aad ku nooshahay Basel ama waqti qaar ka mid ah halkan ku qaataan, waxaa jira noocyo kala duwan oo dhacdooyin jaale adeegga limousine our ee Basel. Basel waa magaalada saddexaad ee ugu weyn ee dalka Swiserland waana sida wax badan oo ay ku bixiyaan dad badan. Tani waxay saameyneysaa dadka deggan, iyo sidoo kale martida. Haddii aad soo booqatid magaalada, u noqo ganacsi ama sababo gaar ah, waxaad isticmaali kartaa adeegga Taxi Basel ee Adeega Mashruuca ugu dambeeyay ee safarka magaaladayada quruxda badan. Gaar ahaan sar sare siyaasiyiinta, dadka caanka ah ama dadka ganacsiga dalalka kale rabto in aad kiraysato limousine nala maxaa yeelay, waxay soo dhoweyneynaa xigmad iyo adeeg gaar ah. Sidaas waxaa jira, tusaale ahaan, wasiirrada, kuwa baangiga jooga, maamuleyaasha sare ama diblomaasiyiinta shaqaaleeyo limousine ah oo keenna la mid Basel iyo u isticmaal sida an Airport Taxi gaar ah. Basel ayaa sidoo kale ku fadhiisan doonaa shirkadaha si fiican u yaqaan, sida Novartis, Roche iyo Swiss International Airlines, oo waxay kuwo badan oo ka mid ah, si joogto ah u marti heer sare ah booqasho ganacsi si Basel. Ma jeclaan laheyd in aad ka kireysatid Limousine Basel munaasabad ganacsi ama dalxiis ku yaal Basel? Wixii safar ganacsi ah waad nadiifin kartaa gaadhiga saxda ah waqtiga saxda ah ee booska saxda ah! Tani waxay sidoo kale waa run, waayo, sodcaalladoodii oo gaar loo leeyahay, iyo sidoo kale shakhsiyaad gaar ah waa Basel sababo kala duwan had iyo jeer booqasho ku kacaya (iyo haddii aad si ay u yimaadaan ka Zurich to our kala iibsiga garoonka diyaaradaha Zurich). Halkan waa Symphonytaas Basel Fanka, Messe Basel ama, laga soo bilaabo Qaybta Dhaqanka, Basler Fasnacht iyo waxyaabo kale oo badan oo la waayo. Marka laga soo tago waxyaabahan dalxiis ee ugu muhiimsan, waxaa sidoo kale jira waxyaabo muhiim u ah noloshii tareenka ugu sareeya ee Basel ka dhigan yahay fikrad wanaagsan. Tusaale ahaan, adeegga limousine waxaa sidoo kale diyaar u ah aroosyada, maalmaha dhalashada ama sanadle ah. Ku guuleysta adeegeena Limousine Basel, qaabka.
Basel Adeeg Basel - Gaadiidkayaga caasimadda gobolka
Maxaad jeclaan lahayd inaad dalbato Taxi Basel oo sharaf leh? Maadaama aad rabto gaadiidka gaarka ah ama magaaladu waxay ku safrayaan Basel, baabuurta tayo sare leh, oo leh darawal aan kala go 'lahayn? Tani waa sida dhabta ah ee nooca VIP Shuttle Basel, oo aan ku dammaanad qaadno baabuurta adeegga limousine. Adeeggeena fasalka dheeraadka ahi wuxuu ku saleysan yahay heer aad u sareeya fasalka dheeraadka ah ee saarayaasha baabuurta ugu fiican. Si loo hubiyo safar ammaan ah oo raaxo leh, waxaan ku tiirsannahay tayada gaadiidka ee Jarmalka: Adiga oo ah adeegga limousine ee Basel, ma gaari kartid oo kaliya meesha aad u socotid. Waxaan dooneynaa inaad dareento inaad ku kalsoon tahay magaaladeena, meel kasta oo ay tagi karto. Tani waa hab wanaagsan oo loola jeedo nalakaaga taksiyada, sababtoo ah waxaanu kugu dhiirineynaa kaliya, waxaanu nahay adeegga limousine. Sida waafaqsan, waxaan la shaqeyneynaa kuwa ugu sareeya ee la dayactiray, la isku hallayn karo iyo kuwa tayo sarre leh:
• Fasallada Mercedes E
• Gaadiidka saldhigga Merced ee E ee Merced
• Mercedes Viano (kuraasta 8)
Gawaarida adeegga limousine waxay ku habboon yihiin labada wareejinta shakhsiyaadka, sida gaadiidka gaarka loo leeyahay ama gaadiidka oo leh kooxo waaweyn. Baahida kasta waxaan haysanaa gaari ugu fiican "bilawga". Waxaan macaamiisheena ka qaadnaa meel walba oo meel walba u qaadaan, taasina waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee wareejinta-basel.ch.
Bedelka Airport Taxi Basel - Ma ahan kaliya Basel ilaa Garoonka Airport Zurich
Mar walba maahan inay ahaato "kaliya" garoonka Taxel Basel - noo adeegga VIP ayaa kuu qaadi doona meel kasta oo aad rabto. Ka fikir kaliya ma booqan Basel, laakiin Switzerland guud ahaan. Ma jeclaan laheyd in lagugu kaxeeyo garoonka diyaaradaha ee Zurich oo leh madaarka garoonka diyaaradaha ee Basel ama in lagu dhufto Bern? Dabcan, waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga safka ah ee gaadiidka gaarka ah. Laakiin maaha oo kaliya, dabcan, adeeggeena limousine wuxuu u shaqeeyaa caalamka, waxaad jeceshahay inaad u safarto 70km oo ka baxsan Freiburg ee Germany, Stuttgart ama Munich. Sidoo kale Liechtenstein, Faransiiska, Talyaaniga ama Faransiisku waa meelo suuro gal ah oo aad udiyaarin kartid adeegga caalamiga ah ee limousine.
Noocyada nalalka ah ee gaarka ah lagama yaabo inaadan waxba ka maqnayn, ama raaxo ama amaan. Khariidadaha: Dhamaan darawalkayaga waxaa lagu gartaa ma aha oo keliya go'aankooda, laakiin sidoo kale qaabka wadista miyir-qabka ah. Dabcan taasi micnaheedu maahan inaadan sameyn karin balantaada wakhtigeeda. Darawalkayadu waxay yaqaanaan sharciyada gaadiidka ee magaalooyinka iyo gaadiidka fog fog ee waddamada kala duwan, waxayna kuugu kaxeyn doonaan si deg deg ah si amaan ah meesha aad rabtid.
Kooxdaada Taxi Basel ee Kooxdaada